HomeWararka MaantaMaamulka Caafimaadka Sweden oo Maanta Sheegay in Todobaadka danbe Xayiraado Cusub lasoo kordhinayo
Dowladda iyo Maamulka Caafimaadka Dadweynaha ayaa sheegay in ay ku dhawaaqi doonaan awaamiir cusub horaanta usbuuca soo socda si loo xaddido fiditaanka caabuqa Corona.
Dhowr gobol, oo ay ku jirto Stockholm, ayaa ku dhawaaqay shalay koror aad u weyn oo ku saabsan faafitaanka caabuqa.
Dowladda iyo Maamulka Caafimaadka Dadweynaha ayaa saaka shir jaraa’id ku sheegay tallaabooyinka la filayo toddobaadka soo socda. “Waxaa jira tillaabooyin kale oo la qaadayo haddii faafitaanka caabuqa uu bato,” ayay tiri agaasimaha guud ee WHO Karin Wessel.
Wessel ayaa carabka ku adkeeyay in talaalka uu yahay cabirka ugu muhiimsan ee looga hortagayo fayraska Corona, isagoo carabka ku adkeeyay inay muhiim tahay in la qaato qiyaasta saddexaad ee tallaalka.
Maamulka caafimaadka ayaa soo saaray saddex xaaladood oo fidinta caabuqa iyo culayska saaran daryeelka caafimaadka. Waxay sheegtay in faafitaanka caabuqa uu hadda ka soo kacay xaalad eber ah, oo ah heerka ugu hooseeya, oo la gaaray muuqaalkii ugu horreeyay, oo ah bartamaha. Si kastaba ha ahaatee, cadaadiska daryeelka caafimaadka iyo daryeelka degdegga ah ayaa weli hooseeya.
Shalay oo Arbaco ahayd, maamulka ayaa u gudbiyay dowladda soo jeedinno ku saabsan tillaabooyinka la qaadi karo haddii xaaladda caabuqa ay ka sii darto.
Infekshanku wuxuu ku kordhay dhawaan qaybo badan oo Yurub ah waxa loo yaqaanay hirarka afaraad ee fayraska.